पक्राउ परेका बलात्कारी अभियुक्तलाई प्रहरीकै मिलेमतोमा भगाइयो ! - लोकसंवाद
पक्राउ परेका बलात्कारी अभियुक्तलाई प्रहरीकै मिलेमतोमा भगाइयो !
महोत्तरी । सेटिङ्गमा जुवा खेलाएको भन्दै यसअघि आलोचना व्यहोरेको महोत्तरीका प्रहरी फेरि अर्को घटनाका कारण चर्चामा आएको छ ।
१ बर्षदेखि फरार अभियुक्त जितु मण्डल शुक्रबार मामाघर आउने सुइको पाएपछी स्थानीयहरुले प्रहरीलाइ खबर गरे । गत शुक्रवार आरोपित भनिएका मण्डल भंगाहा नगरपालिकास्थित मेघरौलमा मामाघरमा पनि आए । शुक्रबार प्रहरीहरु मामाघरमा नै पुगेर मण्डललाई पक्राउ गर्‍यो । उनी पक्राउ परेपछि पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो ।